I-Soho Loft-Igumbi elitsha leChic eArrowtown - I-Airbnb
I-Soho Loft-Igumbi elitsha leChic eArrowtown
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguTerri-Lee
Yonwabela amava anesitayile kolu kukhanya lutsha kunye negumbi eliphakamileyo eliqaqambileyo elikwindawo esembindini ehamba umgama kuyo yonke i-Arrowtown ekufuneka ibonelele; ukuhamba okufutshane ukuya kwisitrato esikhulu kwindawo yokutya ekhethekileyo kunye nokuthenga okanye umlambo kunye neendlela zokuqubha, ukukhwela intaba kunye nokukhwela ibhayisekile entabeni. Ifakwe phantsi kweNtaba i-Soho enemibono ecacileyo ye-Brow Peak ngeefestile ezimbini ekhitshini kunye neendawo zokuhlala, iimpahla eziphezulu, igumbi lokuhlambela elithambileyo kunye ne-crisp, iilinen ezisemgangathweni ziya kwenza ukuba uhlale ungalibaleki.
Indawo yindawo esanda kwakhiwa ngaphezulu kwegaraji ukuya kwindlu yabucala enokufikelela okwahlukileyo.
Indawo yekhitshi: ixhotyiswe ngokupheleleyo ngefriji/isikhenkcezisi, i-oveni yeSMEG ezimeleyo nehob, umatshini wokuhlamba izitya, imicrowave, iketile kunye netoasta. Iipleyiti, izitya, iimagi, iiglasi, iiglasi zewayini kunye nezinto zokunqunqa zinikezelwe. I-Ecostore Dish Liquid kunye neepods zokuhlamba izitya
Indawo yokuhlala kunye neyokutyela: itafile yokutyela kunye nezitulo zokutyela ezi-4. I-sofa enkulu yesikhumba ene-L kunye nezitulo ezi-2 ngamaxesha athile. I-Smart TV. Impompo yobushushu/i-air conditioner
Igumbi lokuhlambela: Ishawa enkulu enethayile epheleleyo kunye nethawula etshisiweyo kaloliwe, indlu yangasese kunye namampunge esisa
Igumbi lokulala: ikhaphethi ehonjisiweyo, ikhaphethi enkulu, i-Queen bed, iikhethini ezimnyama kunye ne-Roman blind, ilinen ekumgangatho ophezulu
Impahla: Umatshini wokuhlamba, iayini, ibhodi yoku-ayina kunye nekiti yoNcedo lokuQala. I-Ecostore yokuhlamba umgubo
Umbuki zindwendwe ngu- Terri-Lee